दोहोरी च्याम्पियनका जज चन्द्र शर्माको चौतर्फी आलोचना - Himali Patrika
दोहोरी च्याम्पियनका जज चन्द्र शर्माको चौतर्फी आलोचना
हिमाली पत्रिका ६ चैत्र २०७७, 1:49 pm
हालै नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘दोहोरी रियालिटी टेलिभिजन शो’ ‘दोहोरी च्याम्पियन’का जजहरुको चर्को आलोचना हुन थालेको छ। । रियालिटी शोका निर्णायकमध्येका एक निर्णयक चन्द्र शर्माको बढि आलोचना भएको छ । उनले दोहोरी गायिका कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीलाई अनावस्यक र व्यक्तिगत टिप्पणी भन्दै उनको चर्को आलोचना भइरहेको हो।
चाँगुनारायण थान भाको गीत गाएकी कल्पना दाहाललाई चन्द्र शर्माले ‘हामीले अरु कुनै टीभी–टीभीतिर देखेको कल्पना बैनी हो तपाई ? तपाई अरु–अरु दोहोरी, एक दुई चोटी कताकता भाइरल–साइरल भएको बैनी हो ? त्यही कल्पना बैनी हो ?’ भन्दै ‘होच्याएर’बोलेका थिए ।
शनिबार युट्युबमा सार्वजनिक यसको पहिलो श्रृङ्खलाले बुधबार बिहानसम्म ३ लाख १० हजार बढी भ्यूज बटुलेको छ । जसमा ८ हजार बढी प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । अधिकांश प्रतिक्रिया आलोचनाले नै भरिएका छन् । अझ, विशेषगरि निर्णायक चन्द्र शर्माले दोहोरी गायिका कल्पना दाहालमाथि गरेको टिप्पणीमा धेरैले आक्रोश पोखेका छन् ।
चन्द्र शर्माको सैली प्रति असन्तुष्ट जनाउदै फेसबुकमा चेत्रबहादुरले लेख्छन् : “कल्पना दाहालाई टिभि सिभिमा भाइरलसाइरल वाली भनेक के हो ? अग्रजले कलाकारलाइ प्रोत्साहित गर्ने कि हतोत्साहित । तपाइ जजबाट तुरुन्त हट्नुस तपाइको मुल्याङकनमा पनि विश्वसनियता हुँदैन ।”
‘दोहोरी च्याम्पियन’लाई नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दोहोरी रियालिटी शो भनिएको छ । यो प्रतियोगीतामा प्रथम हुनेले २० लाख, दोश्रो स्थान प्राप्त गर्नेले १० लाख, तेश्रो स्थान प्राप्त गर्नेले ३ लाख र एक जनाले २ लाख पुरस्कार सहितको सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । ‘दोहोरी च्याम्पियन’ हरेक शनिबार बेलुका ८ः५० बाट नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुँदै आएको छ ।